Ry havana malala, ny Filazantsara araka an'i Lioka 22:24-30 indray amin'ity anio ity no anomezan'ny Tompo torolalala antsika haharetantsika amin'ny famonjen'i Kristy.
Niady hevitra, "...nifanditra..." ny mpianatra ny amin'izay anakiray atao hoe "lehibe" amin'izy ireo eto amin'ny fiandohan'izao teny izao, eo amin'ny and 24. Firifiry amin'ny olona ankehitriny no tsy manao kolikoly etsy sy eroa, mividy ny safin'ny hafa mba hahazoam-pahefana sy voninahitra? Ny sasany aza mahavita manao herisetra mihitsy noho ny amin'izany. Aza adino anefa ry havana fa io fitiavam-pahefana tafahoatra io no nanjeràna ny devoly teo amin'ny toeram-boninahiny. Inona ary no andraikitriny adraikitry ny Radio Protestanta manoloana izany satria alahady natokana hitondrana am-bavaka ho an'ny Radio Protestanta ny andro androany?
Hoy ny and25: "Ny mpanjakan'ny jentilisa mampanompo azy ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa". Izany no endriky ny fahefana eto amin'izao tontolo izao: ny mpanjaka dia mampanompo ny olony, mitady tombotsoa amin'ny fanambakana ny hafa.
Nahitsin'i Jesoa anefa izany fisainana izany ka hoy Izy eo amin'ny and 26 :"Fa tsy mba toy izany ianareo; fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry; ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo.". Isika mpianatr'i Kristy dia mivavaka. Ny toeran'andraikitra misy antsika dia toeram-panompoana, dia tahaka ny hataon'ny Radio Protestanta izay mamompo ny Fiangonana sy ny Firenena.
Dia hoy ny and 27: "Fa iza moa no lehibe, izay mipetraka mihinana va, sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa Izaho dia eo aminareo toy izay manompo.". I Jesoa no lehibe saingy nitondra tena toy ny mpanompo na tsy izany akory aza teo amin'ny mpianatra sy izao tontolo izao. Nanasa ny tongotry ny mpianatra Izy araka an'i Jaona 13:14. Ohatra velona no nomen'i Kristy ho an'ny mpianatra eto: raha manam-pahefana eo amin'ny sehatra misy anao ianao dia hoy ny Tompo aminao : "Hianareo manao Ahy hoe Mpampianatra sy Tompo; ary marina ny filazanareo, fa izany tokoa Aho. Koa raha Izaho, Tompo sy Mpampianatra aza, no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo, mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo." (Jao 13:13-15)
Ny fanontaniana ary dia hoe: Toe-po manao ahoana no takiana amin'izany? Hoy ny and 28: "Ary ianareo no naharitra nanaraka Ahy tamin'ny fakam-panahy nihatra tamiko;". Izany hoe toe-po manam-paharetana no tadiavin'ny Tompo amintsika. Hoy ny fitenintsika malagasy hoe 'Ny akoho hono no tsy nanidina, tsy nahandry ny andro Zoma". Koa manana faharetana amin'izay hatao, manana fanetren-tena amin'izay hatao ary indrindra indrindra reseo ny fakam-panahy fa izany no efa nataon'i Kristy sy nihatra taminy rahateo. Nalaim-panahy hitady fahefana sy laza tokoa mantsy i Jesoa, raha naka fanahy Azy ny devoly, araka ny Mat 4:5-10 saingy nandresy Izy. Ary isika koa, miaraka Aminy miaritra izany fakam-panahy izany ka tsy ho rendrika amin'ny fitiavam-pahefana foana.
Ary tsy very maina akory ry havana ny toe-pon'ny mpitarika manetry tena tahaka izany fa misy tokoa ny valim-pitia. Izao no ambaran'i Jesoa: "koa Izaho dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendren'ny Raiko ho Ahy" (and 29). Koa maherezà ary ry havana fana dia miaritra fanenjehana sy adin-tsaina dia efa tsara omana ny toeram-pahefanao ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, ary ny Tompo mihitsy eto no miantoka izany ho anao. Hoy i Jesoa: "Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin'ny Raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany." (Apo 3:21).
Ary tsy hipetraka fotsiny eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra fotsiny ihany izay maharitra fakam-panahy ry havana fa tena hifaly sy hiara-hisakafo amin'ny Tompo, ka tsy ho mpandroso sakafo fa tena ilay mipetraka rosoana sakafo mihitsy araka ny and 30 manao hoe: "mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakako ianareo sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen'isiraely roa ambin'ny folo". Izany no tena faratampon'ny fahasambarana indrindra sy faratampon'ny fahefana ihany koa satria hitsara ny olom-boafidin'Andriamanitra koa aza: manampahefana amin'ny fanahin'ny olona mihitsy aza, eno fifaliana sy fahasambarana ary fahasoavana sy voninahitra.
Raha tianao ny haharitra amin'ny famonjen'Andriamanitra dia ekeo marina ny fahefan'i Jesoa anio. Mianara Aminy ka manompo ny hafa amin'ny fanetren-tena fa efa voaomana ho anao sahady ny toeram-boninahitra misy ny fahefana tena izy, izay feno fahasambarana mandrakizay.
Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra. AMEN!